Kuyini STD? Sokuqonda lokhu: izifo, izifo ezithathelwana ngobulili. Lokhu isifinyezo ukwazi labantu cishe yonke ovuthiwe ngokobulili le planethi, ngoba kunzima ukugwema umhlangano nabo, futhi njengoba izinyathelo zokuzivikela kudingeka ingalo ngokwabo ngolwazi.
Ezimweni eziningi lwezifo ezithathelwana ngobulili (okulotshiweyo - izifo, izifo ezithathelwana ngocansi) akuzona kabuhlungu izimpawu lomuntu, nakuba zikhona ezehlukile, yebo. Ngakho-ke, akekho uya kudokotela, ikakhulukazi uma isizathu ngokubonisana noma nesineke udidekile ubeka esimweni esiyinkinga phambi umndeni wakhe. Ngeshwa, "ukuzazisa" idlala indima ebaluleke ngokwengeziwe ku uhlelo lesimanje amagugu komuntu kuka impilo enhle. Abortifacients, ukusulwa noma nje bayishaye indiva lesi sifo kuholela emiphumeleni emibi kakhulu esikhathini esizayo. STD ezingabantu kungabangela prostatitis, urethritis, yisishiso we epididymis , futhi ukungabi nenzalo. Uyahlupheka umsebenzi zocansi: libido encishisiwe, izinkinga ukwakhiwa, ejaculation, orgasm ukunikeza kuhlobane ngokuqondile ukutheleleka. Abesifazane engengaphansi kwengu-amadoda, zithambekele ekuzuzeni ezithathelwana ngobulili nasezinhlotsheni ukubhebhetheka kwazo. Kodwa ingxenye enhle uyaqaphela libhekisela ngomzimba wakhe siqu, ngakho isifiso sokuba enempilo abe nezinguqulo namaphesenti recoveries, ngokulandelana, futhi.
Emkhakheni we ingozi usemncane abantu, abesifazane futhi amadoda ubudala zokuzala, abantu ngokobulili futhi ngokuvamile ukushintsha ophathina. Abasebucayini njengoba abesifazane ngobufebe njengendlela yokuthola ukukhiqizwa imali.
Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-amabili STD Amagciwane. Uhlu izifo akuyona kunabayeni inani izikhundla bese uqala kanye edume kunazo futhi ethandwa zazo yilezi: ugcunsula, isipatsholo, i-chlamydia, herpes zangasese, vaginosis virus. Okulandelayo eza lo nosology lingaphansi ezivamile: balanoposthitis, shegellez urogenital, warts zangasese, giardiasis, amoebiasis nezinye.
I preponderance ka isimo lokubala ubuningi babantu esivuna intsha, emthwesa lomshado futhi ushintsho kwezinkambiso sesimilo komphakathi nokomkhaya.
Njengoba amadolobha ekhula, ngaphesheya-ukusetshenziswa Inthanethi ukuhlangana nabantu ezintsha ezithakazelisayo, kwezokuvakasha kwabamazwe ngamazwe, kuhlanganise ubulili-izinkambo.
Ukubekezelelana umahluko ngobudlelwano kwezocansi (homo- futhi geterosostavnye pair womshado).
Public, iziyaluyalu emphakathini: impi, izibhelu, izinhlekelele zemvelo, izifo.
ukutholakala okuphansi izidakamizwa umuthi emazweni yezwe yesithathu, lapho inani labantu ukwanda kanye izimo zokuphila abampofu.
Ukwanda zobufebe njalo yokuzithandela noma ophoqelelwe.
Ukuluthwa yizidakamizwa, ukuluthwa izidakamizwa eziyingozi, ukuluthwa utshwala.
I ukumelana kwamagciwane izidakamizwa, antiseptics ngenxa ukusetshenziswa kwabo kwandile ngaphandle udokotela.
Ukuhlolwa izifo ezithathelwana ngobulili zihlanganisa osenyameni evela Ukutadisha Izitho zangasese zangaphandle. Ngesikhathi reception, udokotela kwenza swab zangasese ezithunyelwa laboratory luhlolo. mikroskopiruyut kokuqukethwe, ingcoliswe aniline udayi, abahlwanyelwe inyama-peptone agar endaweni ethile ukuze zikhule kuseli amasiko. Lona izindlela ezingabizi kakhulu ukuhlola i-laboratory. Ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa igazi ukubona izimpawu zokutheleleka bese uhlole khona omzimba athile ukuze kuhlonzwe. assays Okuningi ezibizayo futhi eqondile njenge-DNA noma i-PCR test, okwembula khona pathogen on impahla zaso zofuzo (ngisho trace amanani) e ukutshezi lwabantu begazi. Ukuhlolwa kwe-STD kungenziwa kunoma iyiphi laboratories kwezohwebo noma zomphakathi, kanye nokuba khona ukudlulisela lukadokotela, futhi ngaphandle kwalo.
Isifinyezo izifo ezinkulu
Ngakho, thina ukuchaza STD ezivamile.
Indlela angena emzimbeni lokhu ukutheleleka? STD lolu hlobo ngeshwa ngocansi hhayi kuphela, kodwa futhi ngokuthintana-yasendlini. Okuphuma cishe asymptomatic. Ukuqubuka okokuqala ivela ngemva kwamasonto 3-5. Phakathi nalesi sikhathi, Treponema pallidum has isikhathi zasakazekela umzimba bese andise inani amakoloni yayo. Ngemva ukuqubuka uzonyamalala (futhi ngeke kwenzeke angabacwasi ngokushesha), futhi ufake i-inkathi ezolile.
ukubonakaliswa Landelayo - chancre izifo esangweni (ngomlomo, umthondo, umonakalo isikhumba izindawo). Bangaphinde ukudlula bebodwa, ngaphandle kokungenela wezokwelapha. Lapho, ngemva kwezinyanga ezimbili le ndoda yaphindela futhi uyalibona amawala, lesi sifo uye wathuthela esigabeni esilandelayo. Ngemva kwesikhathi esithile, ukuqubuka ubalekela futhi, ugcunsula ngeke iminyaka, ngisho namashumi eminyaka wazizwa. Khona-ke ukuzibonakalisa ngesimo chancre ephakeme, insimbi ukuze isikhumba, imisipha namathambo, kubuhlungu. Finals yakho konke lokhu - ukufa eside futhi esibuhlungu ngokuba comorbidities ezifana unhlangothi, isifo senhliziyo, encephalopathy.
samabhamuza ezithweni zangasese
STD okunjalo (okulotshiweyo esikwaziyo kakade) njengoba igciwane herpes simplex yohlobo yesibili ebangela emagciwaneni, lubonakaliswa kuphela izitho zangasese. Ezithathelana ngokocansi bese zibheka (ngesikhathi sokuzalwa) kusho. Owabonakaliswa Ukulunywa endaweni zangasese kanye ukubukeka Bubbles (vesicles) ezinqeni, kwamathanga kwangaphakathi, evutha ukuzwa ngesikhathi ukuchama.
Emaviki lamane kamuva izimpawu, futhi ubonise ngokwabo futhi kuphela uma umzimba iba buthakathaka ngomunye unesifo noma amasosha omzimba encishisiwe. Ngaphandle kokwelashwa, isifo kuba amahlala khona. Kubalulekile banomlando herpes esolwa bahlola ngesikhathi ukuhlela zokukhulelwa, noma ingane ingase izalwe kombungu intrauterine.
Amagcikwane isifo Venereal ngocansi kuphela ngokuhlangana ngokocansi. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa ngabazeka contact amadoda aqale ubovu osenyameni ngesikhathi ukuchama, ephelezelwa ubuhlungu emizweni amajaqamba, ukulunywa, ukushoshozela endaweni imbilapho. Kukhona izimpawu zokutheleleka: imfiva, Ukugodola, ukungakuthandi ukudla.
Lapho siyathelelana lingaphezulu e izitho zangasese yangaphakathi, okuholela sokuzikhulula ubuhlungu, ukuvuvukala wamasende, futhi ngenxa yalokho, ukuze kulungiswe inkinga yokungabi nenzalo. Ukwelashwa kusenesikhathi kusiza zokugwema izinkinga kungenzeka, owawubumba amasosha omzimba is engazinzile, ukuze ingozi abaguliswa futhi wahlala.
I-ejenti causative kuyinto amagciwane intracellular, elikwazi ukuzwa ukuhlolwa igazi kuphela amasosha chlamydiae noma ukuhlola inkanuko okuyinto "izicupho" amagciwane.
Izimpawu zokuqala avele phakathi nesonto ngemva contact. Vela lwamafinyila noma ubovu ocucuzayo, ukulunywa, ubuhlungu. Ngokuhamba kwesikhathi, ubuhlungu iqhubeka, futhi lesi sifo kuba amahlala khona. Ngaphandle nokuphatha kahle esiphathiswa uyakwazi ukuthelela naye ubulili.
Ngemva venereologist esolwa nesineke STD, sokuqonda ukuhlolwa kwakhe yakhe nemlandvo wetekwelashwa kwakhe abaphumelela, uphethwe isethwe - ungaqala ukwelashwa. Banikezwe nabaningi izifo kanye effacement yesithombe emitholampilo ngenxa ukubambezeleka ekufuneni ukunakekelwa, inqubo zokuxilonga zingase zithathe isikhathi kancane.
ukwelashwa STD liqukethe edalula exciter (namagciwane, ama-ejenti elwa namagciwane), eqinisa nesivikelo semvelo (modulators mzimba) kanye zokuvimbela ngezempilo nesiguli. Ngaphezu kwalokho, kudingeka ukuba sithonye umuntu kumele sibukwe ukuletha umlingani wakhe njalo, njengoba kungase futhi kube ogulayo. ukwelashwa STD ungeke uphazamiseke emva izimpawu zinyamalale zonke, ngoba lwegciwane ongawushiyanga ngokuphelele egazini, futhi lesi sifo ungabuyela.
Okwamanje, izinyathelo ukunciphisa inani amacala kwezifo ezithathelwana ngobulili ukuba sifeze izifundo zesikole ngocansi oluphephile, ukusatshalaliswa kwamakhondomu khulula naletibekiwe nokuhlolwa odokotela yonyaka.
Ukuvimbela STD kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi abantu baphathwe ngendlela esifike nezikhungo zezokwelapha usizo. ukuqwashisa umphakathi, ikakhulukazi entsheni, ukuthi kufanele uzivikele kanjani futhi ukubonakaliswa ekuqaleni lezi zifo kunciphisa iphesenti yezinkinga ezingapheli kanye ezinzima. Self STD zokuvimbela - kuba phambi nabo zezivimbo inzalo, futhi ezikhethwe ngokucophelela ophathina.
Ziqaphele impilo yakho! STD kungelashwa ezingabantu ingenye izici wokuqala nenzalo nokuvusa induku ngokobulili.